Ihlobo ngokukhawuleza ukomisa i-Spandex / i-Nylon yamadoda yokuqubha iinqanawa kuLwandle |
Ihlobo ngokukhawuleza ukomisa i-Spandex / i-Nylon yokuDada kwamadoda kwiBhangi
Impahla yangaphantsi yamadoda eyilelwe ukonwaba ngokupheleleyo kunye nenkululeko yokuhamba iyonke, ezi zizishwankathelo zamanqindi zamadoda afuna ukukhululeka imini yonke, yonke imihla.
· Iipesenti ezingama-85 zePolyester 15% Spandex
· Ukuvalwa komtya
· Izixhobo: Iziqu zamadoda zokudada ezenziwe ngelaphu eloluliweyo ezibonisa ukuthamba kakhulu kwaye zikhululekile. Uyilo lomlenze wesikwere unika imilenze yakho ubhetyebhetye ngakumbi kwaye uzive ukhululekile ngexesha lemisebenzi. UPF 50+ ukhuselo lwelanga ngokuthintela imitha ye-UV
· Amagqabantshintshi oYilo: Ukusikwa kwemilenze yesikwere, ukulingana okuncinanana, ulungelelwaniso lwemigca, ibhendi esinqeni esemgangathweni kunye nolungelelwaniso lwangaphakathi lweblue luhamba kuyo yonke imiboko yokudada, unokuhlengahlengisa isinqe sakho ngokukhululekileyo.
· Ilaphu elikhawulezayo elomileyo: ibhodi yokukhwela iibhulukhwe ezincinci ngetekhnoloji eyomileyo ekhawulezayo, iziqu zakho ziya koma phakathi kwemizuzu zikunike inkangeleko enqwenelekayo, lahla amava amanzi emva kokuqubha.
· Isingxobo esine-contour: kunye nekomityi yeblue engxotyeni engaphambili, igumbi elongezelelweyo kunye nentuthuzelo apho ibala khona.
Ngamaxesha: Iibhulukhwe ezimdaka ezipholileyo ziyilungele yonke imidlalo yezamanzi kunye nemisebenzi efana nokubhukuda, ukuntywila, ukusefa elwandle, ulwandle, ukuthamba ilanga, ipati enqanaweni, echibini, ejimini okanye ebalekayo.etc
Hlamba izandla emanzini abandayo, xhoma okanye ulale tyaba ukuze womile. Musa uku-ayina okanye uhlambe emanzini ashushu. Gwema ukukhanya kwelanga.
Egqithileyo Ulusu oluKhawulezayo oluKhawulezayo lokuDibanisa iiUv eziPhefumlayo iiMens zokuqubha
Okulandelayo: Amabhanti ahlengahlengisiweyo aMnyama oMdadada oMdadayo oShukunyiswayo
Amadoda adada esiqwini
Ukudada kwesiqu somntu
Wokudada isiqu samadoda
Umbala oMileyo oMileyo we-M-XXXXL yokuTywina kweFlat ...